Tenisy : hiofana any Maraoka i Miary Zo | NewsMada
Tenisy : hiofana any Maraoka i Miary Zo
Ho fampitomboana sy fanamafisana ny fahaiza-manao, hiatrika fiofanana any amin’ny ITF/CAT High Performance Tennis Center, any Maraoka, Rakotondramboa Miary Zo. Ny 4 – 17 avrily ho avy izao no hiatrehany izany.
Ankoatra izay, hisy koa “tournoi”, miisa dimy, hatrehiny. Anisan’ireny ny ao Tonizia, ny 19 – 23 avrily. Ny ao Alzeria, ny 25 – 30 avrily. Hitohy any Maraoka izany, ny 2 – 21 mey 2016. Manana ny lanjany ireo fihaonana ireo, satria mandray anjara amin’izany avokoa ireo andrarezina eran-tany, toa ilay Frantsay, Louis Tessa, laharana faha-51 eran-tany sy ilay Litonianina, Robertas Vrzesiniski, laharana faha-81, ary ilay Afrikanina Tatsimo, Richard Thongoana, laharana faha-142. Mba hanenjehana isa, amin’ny fanasokajiana ireo mpilalao eo anivon’ny federasiona iraisam-pirenena, ny antony hanaovany izany.
Raha tsiahivina, tany amin’ny laharana faha-1267 no nisy an’i Miary Zo, ny volana janoary lasa teo, ary niakatra 786 izy ankehitriny, taorian’ny fiatrehany ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, natao ny volana febroary lasa teo, ka nahazoany ny laharana faha-9.
Marihina fa mbola “junior”, ankehitriny, i Miary Zo ary tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny sokajy U18, ny taona 2015.
Mialoha ny hialany eto Madagasikara, mbola hiatrika ny lalao famaranana, eo amin’ny U18, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny seksiona Antananarivo Renivohitra, hatao eny Ankatso, amin’ny asabotsy ho avy izao, ny tovolahy. Fihaonana hikatrohany amin-dRadonirina (Son).